Akụkọ - Otu esi ahọta usoro isi ọnyịnye kwesịrị ekwesị maka igwe ntinye ego SMT dị elu?
Mgbe ụlọ ọrụ na-ahọrọ igwe ntinye igwe dị elu, ihe atọ dị mkpa bụ nhazi dị elu, ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, na nkwụsi ike dị elu iji hụ na ị na-etinye ọsọ ọsọ ọsọ mgbe ị na-ezute nkenke ntinye micro chip.
Iji mezuo mmetụta achọrọ, usoro nhazi isi kwesịrị ekwesị (usoro isi) dị mkpa karịsịa. Naanị mgbe atụmatụ ahụ ziri ezi ka nhazi nhazi ahụ ga-adịkwu irè.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere ọtụtụ ụzọ isi edozi isi: edozi otu isi, edozi isi ọtụtụ, na-agbanwe otu isi ma na-agbanwe ọtụtụ isi. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ bụ n’ezie ụzọ dịgasị iche iche nke usoro mmegharị na ọnụọgụ isi isi.
Ọnọdụ ntụgharị 1: mmegharị usoro
Ihe ngwọta a nwere ike ịme mmegharị ahụ, na-ejikarị ogwe aka ma ọ bụ ogwe osisi iji chịkwaa moto iji mee ka mmegharị ahụ dịkwuo elu, nke bụ nhọrọ dị oke ọnụ ahịa.
Ihe dị iche n’etiti isi abụọ na isi isi bụ ịbawanye ọrụ n’otu oge site na ịbawanye ọnụọgụ isi iji nweta ebumnuche nke imeziwanye arụmọrụ.
Ọnọdụ ntụgharị 2: akara kwụ ọtọ + ntụgharị
Ihe ngwọta a nwere ike ịrụ ngagharị na ntụgharị ntụgharị n'otu oge, ma mee nnukwu mgbanwe na axis Z. N'ihe banyere otu ọnụ ọgụgụ isi, ọ na-echekwa ohere karịa ihe ngwọta edozi, dị nha arọ, obere ọsọ, na oke ziri ezi. Ọ bụ karịsịa kwesịrị ekwesị Short ọrịa strok, ala ibu, elu kpọmkwem ngwa ndapụta.
N'okpuru nnukwu ọnụ ọgụgụ nke "ntụgharị ogologo + ntụgharị", ọdịiche dị n'etiti otu isi na isi ọtụtụ bụ otu ihe ahụ edozi. O yiri ka ọ na - eme ka ọnụọgụ ọnụọgụgụ dị elu, mana ọ na - emekwa ka igwe na - ebuwanye ibu na ogo ya. Otutu ntinye Isi na-aru oru n'otu oge.
Ihe ngwọta dị iche iche nwere ike nke aka ha, ụlọ ọrụ kwesịrị ịhọrọ ngwọta kachasị mma dabere na ọnọdụ n'ezie. Na-atụle nke ọma site n'ọtụtụ akụkụ dị ka ụgwọ, izi ezi, ọsọ, nkwụsi ike, wdg, wee họrọ ihe ngwọta kachasị dị ugbu a. Ihe kachasị mma maka gị kachasị mma!